स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैकले साढे २२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने — Imandarmedia.com
१आफ्नै श्रीमानले ज्वाला संग्रौलाको यस्तो पोल खोलिदिएपछि सबैको होस उड्यो
२गगन थापाको वलि लाई चेतावनि के भने तेस्तो ?
३राष्ट्रपति भण्डारी टिचिङ हस्पिटल भर्ना, के भइन बिरामी
४भीम रावलले माधव क्याम्प छाडेकै हुन् त ?
५ओलीलाई ठूलै झड्का दिनेगरी सातै प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने देउवा सरकारको तयारी,गठबन्धनमा खुसीयाली
६इजरायलमा एक हजार नेपालीलाई मासिक २ लाख तलब दिने गरी खुल्यो जागिर, सूचनासहित
७जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक आज बस्दै, ठाकुर पक्ष जान्छ की जादैन ?
८यस्तो गोप्य सूचना पाएपछि हतारिदैँ शितलनिवास छिरे ओली
९लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल फेरि अल्पमतमा, अब के हुन्छ ?
१०नेपाल सरकारका उप-सचिव पक्राउ छाेरी बलात्कार गरेकाे आरोप अब के हुन्छ ?
११नयाँ दल दर्ता गरे संघ र प्रदेशको सांसद पद धरापमा, जसपामै बस्दा के हुन्छ ?
१२‘गरिवहरु जीवनभर कर तिर्ने, शासकहरु महंगा गाडि चढ्ने स्थिति अन्त्य नभएसम्म यो देश बन्दैन्’
८२ सन्तानकी भाउजु लिएर देवर भागे,पक्राउपछिको बयान सुन्दा दुनियाँ चकित
९मुख्यमन्त्रीलाई धोका दिएका दिपक मनाङेलाई लाग्यो ४४० भोल्टको झड्का
१०संसद पुनर्स्थापना भएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन यस्तो घोषणा, देशभर तरंग
११ठमेलबाट चिनियाँहरुको घिनलाग्दो हर्कत बाहिरियो
स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैकले साढे २२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । वैदेशिक लगानीसहितको स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले प्रतिशेयर साढे २२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रवार बसेको बैकको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिशेयर साढे २२ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने निर्णय गर्नका लागि मंसीर २३ गते साधारणसभा बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । साधारणसभा बोलाएको बैकले मंसिर ९ गतेदेखि २३ गतेसम्म शेयर दाखिला खारेज दर्ता बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्तै हिमालयन बैंकले २२ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । आज बसेको बैकको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारणसभाबाट पारित भएपछि १० प्रतिशत वोनस शेयर र १२ प्रतिशत नगद लभांश दिने निर्णय गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत हुन आउने वोनस शेयर र १२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । बैकको साधारणसभाले पारित गरेपछि लाभांश वितरण गर्ने बैकले जनाएको छ । त्यस्तै आइसीएफसी फाइनान्सले समेत शेयरधनीहरुलाई १३ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ ।
फाइनान्सको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ५ प्रतिशत वोनस शेयर र ८ प्रतिशतले हुन आउने रकम नगद लाभांश र ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । फाइनान्सको सधारणसभाले पारित गरेपछि सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।
यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले १० दशमलव ५ प्रतिशत वोनस र साढे ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले कुल् १९ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । बैकले चुक्ता पूँजीको १९ प्रतिशतले हुन आउने २ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ(करसहित) नगद र वोनस शेयर दिने निर्णय गरेको हो ।
बैकको साधारणसभा आगामी मंसिर २० गतेका लागि बोलाइएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकले १ अर्ब ३५ करोड १३ लाख २३ हजार बराबरको वोनस शेयर र एक अर्ब ९ करोड ३९ लाख २८ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो ।
नगद लाभांश र वोनस शेयर दिने निर्णय राष्ट्र बैकबाट समेत स्विकृत भइसकेको र आगामी मंसीर २० गते बस्ने साधारणसभा बैठकले पारित गरेपछि लागू हुने जनाइएको छ ।
अर्थ-विजनेस सँग सम्बन्धित